Wasiiradii socdaalka Nooweey oo sheegtay ineeysan hubin sii ahaan-shaheed wasiir | Somaliska
Haweeneyda uga aheyd wasiiradda laanta socdaalka dalkaasi Noorweey Sylvi Listhaug, ayaa sheegtay ineeysan hubin ineey heeyn doonto xilkeedii hore ee laanta socdaalka. Wareeysi ay siisay TV2 dalkaasi ayey markii ugu horeeysay sheegtay ineeysan hub in xilkaas dib ugu laaban doonto iyo in kale.
Waxaa ay xustay in ay ku faraxsan tahay xubinimadeeda baarlamaanka dalkaasi iyo in ay soo idlaadeen doorashadii dalkaasi ka dhacday maalintii shalay aheyd. Haweeyneeydan oo wasiirkii socdaalka iyo ajaanibta dalkaasi ayaa caan ku ah siyaasad ad adag oo xagjirnimo ku dheehan tahay, waxaa aad loogu xasuustaa sida ay qoysaska soomaalida dalkaasi uga dhigatay shaqo.
Intii lugu jiray ollaha doorashadda Noorweey ayey booqasho ku timid magaalo madaxda Iswiidhan ee Stockholm halkaaso oo la filaayey ineey la kulanto dhigeeda Iswiidhan balse wasiiradda ku hungoowday ka dib markii wasiiradda socdaalka Iswiidhan ay diiday ineey qaabisho, hadalo ay horey uga sheegtay dalkaan Iswiidhan awgeed.
Dhalaanka keli socodka ah ee Iswiidhan oo nolol wel wel iyo cabsi leh ku nool